Kooxda Turkiga Basaksehir ayaa Manchester United dhadhansiiyey guuldaro qaraar… – Hagaag.com
Kooxda Turkiga Basaksehir ayaa Manchester United dhadhansiiyey guuldaro qaraar…
Posted on 5 Nofeembar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Kooxda Turkiga, Basaksehir, ayaa joojisay bilowgii fiicnaa ee ay ku socotay Manchester United tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedkan, ka dib markii ay si lama filaan ah uga guuleysteen 2-1 Arbacadii, wareega saddexaad ee Group H ee tartamada qaaradda.
Basaksehir – oo markii ugu horeysay ka qeyb galaysa wareega group-yada Champions League – ayaa heshay seddexdii dhibcood ee ugu horeysay ee group-ka, laakiin waxay weli fadhidaa halka ugu hooseysa kala sareynta, inkasta oo keliya farqiga goolasha ay ugu horeeyaan Paris Saint-Germain iyo Leipzig, oo ku kala jira kaalinta labaad iyo seddexaad siday u kala horreeyaan, ka hor kulankooda Arbacadii ee Jarmalka.
Dhinaca kale, Manchester United, oo labadii kulan ee ugu horreysay Group-yada ka adkaatay Paris Saint-Germain iyo Leipzig, ayaa hoggaanka ku haysa 6 dhibcood.
Xiddiga kooxda Basaksehir Demba Ba ayaa dhaliyey goolka Basaksehir (13), isagoo dhaliyay goolkii ugu horeeyay ee kooxda Turkiga taariikhdeeda ka dhalisa tartanka, ka hor inta uusan saaxiibkiisa reer Bosnia Eden Veska ku darin goolka labaad (40).
Xiddiga reer France, Anthony Martial, ayaa Manchester United u dhaliyey goolka kaliya (43), iyadoo “Red Devils” aysan awoodin inay barbareeyaan ugu yaraan waqtiga ka harsanaa ciyaarta, taasoo Basaksehir ay guul taariikhi ah ka gaartay ManUtd.
Guruub F, Lazio waxay barbaro la gashay Zenit Saint Petersburg, Russia, 1-1.
Lazio ayaa dhibcaheeda ka dhigtay 5 dhibcood oo ay ku hogaamineyso guruubka, halka Zenit ay heshay dhibicdii ​​ugu horeysay ee group-ka, iyagoo kaalinta afaraad ku dhameystay.